ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဆီမီး ၉၀၀၀ လှေကားနားတွင် ဈေးသည်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်စဉ် •
09/11/2019 Yan Naing ပြည်တွင်းသတင်း 0
ကျိုက် ထီး ရိုး ဘု ရား ဆီ မီး ၉၀၀၀ လှေ ကား နား တွင် ဈေး သည် များ နှင့် သက် ဆိုင် ရာ အ ဖွဲ့ အ စည်း များ ပ ဋိ ပ က္ခ ဖြစ် စဉ် တွေ ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ် …. ။
ကျိုက် ထီး ရိုး ဘု ရား မုခ် ဦး အ နီး က နေ လမ်း ဆုံ အ ထိ ဈေး မ ရောင်း ရသတ် မှတ် ထား တဲ့ နယ် မြေ အ တွင်း ဈေး သည် များ ဈေး ရောင်း ချ နေ မှု ကို ကျိုက်ထီး ရိုး ဘု ရား ဂေါ ပ က စည်း ကမ်း ထိန်း သိမ်း ရေး အ ဖွဲ့ စည်း နှင့် မြန် မာ နိုင် ငံရဲ တပ် ဖွဲ့ ၊ စည် ပင် သာ ယာ ရေး ကော် မ တီ ဝင် တွေ အ ပါ အ ဝင် အ ဖွဲ့ စုံ က ဝင်ရောက် ရှင်း လင်း ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ် …. ။
အ ခု လို ကျူး ကျော် ဈေး သည် များ အား သက် ဆိုင် ရာ အ ဖွဲ့ အ စည်း ပေါင်း စုံ မှ ဖယ် ရှား ရှင်း လင်း မှု တွင် ကျူး ကျော် ပျံ ကျ ဈေး သည် များ နှင့် ပ ဋိ ပ က္ခဖြစ် စဉ် အ ချို့ ဖြစ် ပွား ခဲ့ ပြီး အ ဆို ပါ ဖြစ် စဉ် ဖြစ် ပွား နေ မှု ဗွီ ဒီ ယို ဖိုင်များ သည် လူ မှု ကွန် ယက် စာ မျက် နှာ များ တွင် ပျံ့ နှံ့ လာ ခဲ့ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် … ။
ယ ခု ဖြစ် စဉ် ဖြစ် ပွား နေ မှု ဗွီ ဒီ ယို ဖိုင် များ သည် ဒီ နေ့ ( ၈ . ၁၁ . ၂၀၁၉ ) ကျိုက်ထီး ရိုး ဆီ မီး ၉၀၀၀ လှေ ကား နား တွင် ဖြစ် ပွား ခဲ့ ကြောင်း သိ ရှိ ရ ပါ တယ် …. ။
ကြိုကျထီးရိုး ဆီမီး ၉၀၀၀ လှကေားနား (၈.၁၁.၂၀၁၉) ဖွဈစဉျဟုသိရ
ကြိုကျထီးရိုးဘုရား ဆီမီး ၉၀၀၀ လှကေားနားတှငျ စြေးသညျမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြား ပဋိပက်ခဖွဈ—————————နိုဝငျဘာ(၈)AlinnMyay(အလငျးမွေ)ကြိုကျထီးရိုးဘုရား မုချဦးအနီးကနေ လမျးဆုံအထိ စြေးမရောငျးရသတျမှတျထားတဲ့ နယျမွအေတှငျး စြေးသညျမြား စြေးရောငျးခနြမှေုကို ကြိုကျထီးရိုးဘုရားဂေါပက စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့စညျး နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့၊စညျပငျသာယာရေးကျောမတီဝငျတှအေပါအဝငျ အဖှဲ့စုံက ဝငျရောကျရှငျးလငျးခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။အခုလို ကြူးကြျောစြေးသညျမြားအား သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးပေါငျးစုံမှ ဖယျရှားရှငျးလငျးမှုတှငျ ကြူးကြျောပြံကစြေးသညျမြားနှငျ့ လာရောကျရှငျးလငျးတဲ့ အဖှဲ့တှေ ပဋိပက်ခဖွဈစဉျအခြို့ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး အဆိုပါဖွဈစဉျဖွဈပှားနမှေု ဗှီဒီယိုဖိုငျမြားသညျ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားတှငျ ပြံ့နှံ့လာခဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ။ယခုဖွဈစဉျဖွဈပှားနမှေု ဗှီဒီယိုဖိုငျမြားသညျ ဒီနေ့ (၈.၁၁.၂၀၁၉) ကြိုကျထီးရိုး ဆီမီး ၉၀၀၀ လှကေားနားတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။Video Credit – Chan Myae Zaw#AlinnMyay(အလငျးမွေ)
Posted by AlinnMyay on Friday, November 8, 2019
crd original poster